Kulan lagu daahfurayay maalmaha talaalka carruurta oo lagu qabtay Bosaso (Sawiro) – Radio Daljir
Nofeembar 3, 2012 3:37 g 0
Bosaso, Nov 03 – Munasabad balaaran oo lagu furayay maalmaha caafimaadka carruurta ayaa? maanta lagu qabtay magalada Bosaso, waxaana munaasabadda kasoo qayb galay dadweyne badan, qaarkamida masuuliyiinta goblka, degmada iyo madaxda wasaaradda caafimaadka Puntland.
Ugu horayn waxaa munaasabadda furay isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Bari Saciid Maxamed waraabe, waxaa uu sheegay ujeedada munaasabadani inay tahay sidii ay bulshada ugu wargelin lahaayeen maalmaha caafimaadka carruurta in laga bilaabayo deegaanada Puntland, isagoona booriyay waalidiinta inay si hufan uga faa’iidaystaan maalmaha uu talaalku socdo.
Duqa degmada Bosaso Xasan Cabdalle Xasan oo ka mid ahaa masuuliyiintii munaasabadda ka hadlay ayaa isna sheegay sida muhiim u tahay carruurta in laga talaallo cudurada dilaaga ah, waxaana uu mahadcelin usoo jeediyay masuuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo WHO oo howshani iska kaashanaya.
Wasiir kuxigeenka wasaaradda caafimaadka Puntland Marwo Saynab Ugaas Yaasiin oo munaasbaadda soo gabagabaysay ayaa waxaa ay sitoos ah ugu dhawaaqday maalinimada beri inay si toos ah u bilaaban doonaan maalmaha caafimaadka iyadoona bulshada kula dardaarantay inay la shaqeeyaan dadka ku howlan sidii ay bulshada u gaarsiin lahaayeen dawooyinka maalmaha caafimaadka,
Marwo Saynab Ugaas Yaasiin ayaa goobta xafladdu ka socotay waxaa ay dhicdii ugu horaysay ee talaalka siisay mid ka mid ah carruurta da’da yar ee nasiibka u hellay inay ka faa’iidaystaan talaalka.
Talaalka maalmaha caafimaadka carruurta oo ka hortagaya cudurada dabaysha, gowracatada, jadeecada iyo kuwo kalle ayaa bilaaban doona maalinta berri, iyadoo uu socon doono qaybtiisa kowaad ilaa sideeda bishan, qaybta labaad ayaa la bilaabayaa 10-ka bishan iyadoo lasoo gabagabayn doono 14-ka bishaan, waxaa saraakiisha caafimaadku ay gaari doonaan tuulooyinka iyo degmooyinka Puntland oo dhami.
Haweenka gobolka Bari oo Ubax Tahliil u aqoonsaday gudoomiyaha saxda ah ee haweenka qaranka